यी खानेकुरा जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ – Namaste Dainik
June 8, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on यी खानेकुरा जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ
तपाईं आफ्नो दैनिक खानामा दही समावेश गर्नुहुन्छ ? लसुन नि ? यसमा पक्कैपनि तपाईंको जवाफ सकारात्मक आउनेछ । लसुन त हाम्रो खानाको अभिन्न हिस्सा नै भयो । तरकारीमा लसुन नभई हुन्न । त्यसैले त यो भान्सामा अनिवार्य हुने गर्छ ।
तपाईंलाई हेक्का हुनुपर्छ, दही स्वादिलो मात्र होइन अत्यान्तै लाभदायक पनि हुन्छ । खासगरी पेटको लागि दही सेवन उपयोगी मानिन्छ । दहीमा भएको प्रोबायोटिक तत्वले खाना पचाउनमा मद्दत गर्छ । यसैगरी दहीमा प्रोटिन तथा क्याल्सियम सहित भिटामिन बी ६ तथा बी १२ हुन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । दहीमा पोटाशियम पनि पाइन्छ, जसले पाचन तन्त्रमा फाइदा गर्छ ।
होमपेज / स्वास्थ्य-जीवनशैली / खाना
२०७७ जेठ २६ गते १६:३० मा प्रकाशित
सागसब्जी, दाल आदिमा लसुनको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ । लसुनमा एन्टी–व्याक्टेरियल तथा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ । औषधिय गुणले भरिपूर्ण लसुनको सेवनले रोगसित लड्ने क्षमताको विकास गर्नुका साथै रोगसँग लड्न सहयोग पु¥याउँछ ।
लसुन भन्दा कम उपयोगी छैन, बेसार पनि । सागसब्जीमा बेसार त नभई हुन्न । बेसारले सागसब्जीको रंग आकर्षक बनाउने मात्र होइन, स्वास्थ्यलाई समेत फाइदा गर्छ । बेसारको सेवनले विभिन्न किसिमको रोगको संक्रमण हुनबाट शरीरलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ । साथै, यसले विभिन्न रोग निको पार्ने हुदाँ आयुर्वेदमा यसलाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसलाई औषधीको रुपमा दुध तथा पानीमा मिसाएर खाएमा यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
भिटामिन ‘सी’को राम्रो स्रोत हो, कागती । कागतीका साथै सुन्तला, अंगूर पनि भिटामिन ‘सी’ तथा एन्टीअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो । भिटामिन ‘सी’ ले सेतो रक्तकोषिका उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ, जसले संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्छ ।
नेपालीहरुमाझ चिया लोकप्रिय छ । चियामा पनि कालो चिया तथा ग्रीन टी धेरैको रोजाईमा पर्ने गर्छ । ग्रीन टी तथा कालो चियामा पर्याप्त मात्रामा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व रहेको हुन्छ, जसको सेवनले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ ।
तरकारीको सुचीमा ब्रोकउलीलाई निकै स्वास्थ्यकर मानिन्छ । जसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक पोषणतत्वको प्रवाह गर्छ । यसमा फाइबर तथा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्वका साथै भिटामिन ए, सी, तथा डी पाइन्छ । त्यसैले, खानामा काँचो वा हल्का पाकेको ब्राकाउलीलाई समावेश गरेर पनि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सकिन्छ ।
हरिया सागसब्जीहरुमा पनि पालुङ्गोलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । पालुङ्गोमा कैरोटीन, एन्टी अक्सिडेन्टतत्वका साथै भिटामिन सी पाइन्छ । पालुङ्गोले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने भिटामिन तथा पोषण तत्वको पूर्ति गर्छ ।